काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सरुवा र ठेक्कापट्टाबाट प्राप्त हुने कमिशनको पछि नलागी सडकको आयु बढाउन सक्रियरुपमा लागिपरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । दुई वर्षसम्म काठमाडौँका सडकहरु हिलाम्मे, धुलाम्मे र खाल्डाखुल्डी भई सर्वसाधारण जनताले सास्ती खेप्दै आइरहेका थिए ।
पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठ एण्ड कम्पनीले अलपत्र पारेर छाडेका उपत्यकाका अधिकांश सडकहरु मन्त्री नेम्वाङ आएपछि चिल्लो बनेको छ । हरेक पाँच वर्षमा सडकको आयु लम्ब्याउन कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको थिएन । मन्त्री नेम्वाङको अभियानमा साथ दिएर सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पनि जनसमर्थन बटुल्न सफल भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अहिले पिचमाथि पिच थपेर चिल्लो पारिएको सडक अबको ४–५ वर्षसम्म टिक्ने र विदेशी पाहुना आउँदा रातारात मर्मत गर्न नपर्ने बताइएको छ ।
सडक विभागमा कामभन्दा हाम गर्न पल्केका सु. इ. तथा डि. इ. हरुलाई मन्त्री नेम्वाङको सक्रियताले निदहराम बनाएको चर्चा चलेको छ । सातवटै प्रदेशका निर्माणाधीन सडकहरुको अवस्थाका बारेमा मन्त्री नेम्वाङले अनुगमन गर्न थालेपछि सुइ, डिइ र योजना प्रमुखहरु फिल्डमै बस्न बाध्य भएका छन् । यता मन्त्री नेम्वाङको अभियानमा सचिव देवेन्द्र कार्की बाधक बनेपछि सरुवाको चर्चा चलेको छ । विगतमा माधव कार्कीलाई समर्थन नगरी देवेन्द्र कार्कीलाई समर्थन गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै खेदेको आरोप लागेको छ । सचिव कार्कीको विगतलाई पल्टाउने हो भने जोकोही पनि जिब्रो टोक्न बाध्य हुने सडकका जानकारहरुले बताएका छन् । नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारमा कार्कीजस्ता काँग्रेसको हुनमानलाई राख्नु भनेको मन्त्री नेम्वाङले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्नु हो भनी नेकपावृत्तमा टिप्पणी हुने गरेको छ । स्वार्थहीन मन्त्री र आर्थिक मामलामा लम्पट सचिवबीच कसरी तालमेल होला भनी चर्चा चलेको छ ।